အကောင်းဆုံး Wiseplay စာရင်းများကို Download လုပ်ပါ Androidsis
Wiseplay စာရင်းများ၊ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဆိုဒ်နှင့်မှန်ကန်စွာမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ဟိုဆေး Alfocea | | Android application များ, လွှ, Android cheat, လဲ tutorial
ငါပြသခဲ့တဲ့ဗွီဒီယို post ကိုဖတ်ပြီးနောက်၊ သုံးစွဲသူများစွာရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတုံ့ပြန်လိုက်တယ် Channel ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ, နာမကိုအမှီတုံ့ပြန်သော application တစ်ခု နေပြည်တော်မည်မျှရိုးရှင်းကြောင်းပြသရန်ဗွီဒီယိုပါ ၀ င်သောဤစာမူကိုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် Wiseplay စာရင်းအသစ်များကိုရယူပြီး၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal တွင်အခမဲ့ပေးဆောင်ရသောတီဗီအားလုံးကိုခံစားနိုင်ခြင်း။
သင်သိလိုလျှင်ယခုသင်သိ, Wiseplay စာရင်းများကို download လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက် ၎င်းတို့ကိုမှန်ကန်စွာထည့်သွင်းပါ၊ ကိုနှိပ်ပါ «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ရှုပါ» စာရင်းများကိုကူးယူခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတစ်ခုမှတဆင့်ထည့်သွင်းခြင်း၏ရိုးရှင်းသောဖြစ်စဉ်ကိုသင့်အားသင်ပြမည်။
1 Wiseplay Lists ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံး site
2 Wiseplay စာရင်းများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်သွင်းနည်း
3 အကောင်းဆုံး Wiseplay စာရင်း
Wiseplay Lists ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံး site
အတွက်အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက် Wiseplay စာရင်းများကို download လုပ်ပါ lo tenemos disponible mediante el propio foro de forowise.com, un foro oficial y especifico en el que vamosapoder encontrar las mejores listas para disfrutar de toda la televisión de pago gratis en nuestro Android así como todo el fútbol que nos ofrece el Canal+ igualmente gratis.
ရုံအပိုင်းကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် စာရင်းဖိုရမ်တွင်မှတ်ပုံတင်စရာမလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည် Wiseplay စာရင်းများအပါအဝင်အကောင်းဆုံးစာရင်းများကိုကူးယူနိုင်လိမ့်မည် နေ့စဉ်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော HD စာရင်းများ ပါဝင်သည့်လိုင်းများသည်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်သေချာစေရန်။
Algunas de las mejores listas que se incluyen en el foro sin duda alguna son las de España Total Premium HD, Cine Total Premium HD o Music Channel Premium HD que son las listas oficiales del foro y son las que se actualizanadiario. De todas formas, si estas listas no os funcionan, podéis iraver OnePlay.tv သို့မဟုတ် MegaTV Player ကိုအခမဲ့ သုံး၍ စပိန်နိုင်ငံရှိအခပေး TV ကိုကြည့်ရှုရန်ဤရွေးချယ်စရာ.
ဤလိုင်းများအထက်တွင်ထားခဲ့သည့်ပူးတွဲပါသောဗီဒီယိုတွင်သင့်အားရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြသမည် download လုပ်ထားသော Wiseplay စာရင်းများကိုထည့်သွင်းပါ တရားဝင်ဖိုရမ် forowise.com မှ။ Wiseplay ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောစာရင်းကိုဖွင့်ရန် browser ကိုပြောရန်ကန့်သတ်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်၊ ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါက၎င်းဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ဝဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကူးယူပါ။ ကူးယူထားသောဖိုင်၊ ၎င်းမှာကူးယူထားသော Wiseplay စာရင်းဖြစ်သည် / ပညာ.
ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များဖြင့်သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်ပူးတွဲပါဗီဒီယိုတွင်ပြသသကဲ့သို့၎င်းကိုအဆင်ပြေစွာကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့သင်လစာပေးသောချန်နယ်အားလုံးကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးမှာအရာအားလုံး Canal Plus Liga မှထုတ်လွှင့်သောဘောလုံးပွဲများအပါအ ၀ င်အခမဲ့ဖြစ်သည်.
နှင့်အမှု၌သင်တို့ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုအကြောင်းကိုမဆိုမေးခွန်းများရှိသေး၏ Wiseplay စာရင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးတပ်ဆင်ပါ မှန်ကန်စွာငါကသင်တစ်ဆင့်ချင်းစီကရှင်းပြပါလိမ့်မယ်:
ဤဆောင်းပါးကိုသင်၏ Android စမတ်ဖုန်း (သို့မဟုတ်သင့် iPhone) တွင်သင်အသုံးပြုသောဘရောင်ဇာဖြင့်ဖွင့်ပါ။
သင်ကူးယူလိုသော Wiseplay စာရင်း၏ link ကိုနှိပ်ပါ
၀ င်းဒိုးအသစ်တွင် "Open in Wiseplay" ကိုနှိပ်ပါ။
အလိုအလျောက် Wiseplay စာရင်းကိုသင်၏လျှောက်လွှာထဲသို့ထည့်ပြီး၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုသင်စတင်ခံစားနိုင်လိမ့်မည်။
သင်ထည့်ချင်သောစာရင်း၏ URL ကိုကူးပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်၊ ကူးယူရန်ရွေးချယ်စရာပေါ်လာသည်အထိသင်၏လက်ချောင်းကိုဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်ပေါ်တွင်ထားပါ။
သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် Wiseplay အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ
မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အောက်ခြေရှိအနီရောင်စက်ဝိုင်းတစ်ခုအတွင်းရှိ "+" သင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ။ ထိုတွင် "စာရင်းများကိုစတင်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။ "
Pop-up ဝင်းဒိုးတွင်“ Add List from URL” option ကိုနှိပ်ပါ။
စာရင်း၏ URL ကိုကူးထည့်။ "OK" ကိုနှိပ်ပါ။
ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များဖြင့်သင့်အားပုံများနှင့်ပူးတွဲပါသောဗီဒီယိုတွင်ပြသခဲ့သကဲ့သို့၎င်းသည်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည့်အလားတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ တီဗီလိုင်းအားလုံးကိုကြည့်ပါ အခမဲ့ငွေပေးချေမှုMovistar +၊ အကောင်းဆုံးဘောလုံးဂိမ်းများ၊ နိုင်ငံခြားရုပ်သံလိုင်းများ၊ အကြောင်းအရာအလိုက်ချန်နယ်များနှင့်များစွာပါဝင်သည်။
အကောင်းဆုံး Wiseplay စာရင်း
Algunas de las mejores listas que se incluyen en el foro, sin duda alguna, son las de España Total Premium HD, Cine Total Premium HD o Music Channel Premium HD que son las listas oficiales del foro y son las que se actualizanadiario.
သို့သော်၎င်းတို့သည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ ပညာရှိစာရင်း။ အောက်တွင်သင့်အားကျယ်ပြန့်သောစာရင်းတစ်ခုကိုပြသပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာရင်းများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်လွယ်လွယ်ကူကူမည်သို့တပ်ဆင်နိုင်ကြောင်းနှင့်နာရီ၊ နာရီ၊ ရုပ်ရှင်၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ၊
အခပေးလိုင်းများကိုအခမဲ့ကြည့်ချင်ပါသလား။ လိုမျိုးအက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးပါ Ketchup တီဗီ ပြီးတော့သင်ကလွယ်ကူလိမ့်မယ်
ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်မလုပ်မီ၊ စာရင်း နေပြည်တော် ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကို Androidsis မှတီထွင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အခြားသူများ၏လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ယခုမှာဟုတ်ကဲ့, ၏ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်စုစည်းဘို့အဆင်သင့် ပညာရှိစာရင်း.
စပိန်ရုပ်ရှင်စာရင်း download link (w3u)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်စာရင်းများ download link (w3u)
တိုက်ရိုက်တီဗီလိုင်းများ download link (android kez)
ရုပ်ရှင်ရုံအားလုံး download link(android kez)
တီဗီ၊ ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အားကစားပွဲများကိုလမ်းညွှန်ပါ download link
စီးရီး download link (android kez)
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စီးရီး download link (android kez)
သေးငယ်တဲ့ကမ္ဘာ download link(android kez)
ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီး ဖရာကမ် download link
ရုပ်ရှင်စာရင်း ဖရာကမ် download link
လူကြီးရုပ်ရှင်များ download link (android kez)
အရွယ်ရောက်သောလိုင်းများ (+18) download link (android kez)
MOVISTAR + (စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောလိုင်းများ) download link (android kez)
အားကစား Acestream download link (android kez)
Tecno တီဗီ HD လိုင်းများ download link
Tecno တီဗီစပိန်စာရင်း download link
Tecno တီဗီရုပ်ရှင် download link
Tecno တီဗီကလေးစာရင်း download link
တူးမွောငျး TV download link
စာရင်း JCMEGA download link
JCMEGA Cine m3u download link
Edson ၏စာရင်းများ ADIVICI တီဗီ download link
Androidaldia HD လိုင်းများ 2.0 download link
အရွယ်ရောက်လိုင်းများ TV (+ 18): download link
Anime နှင့်မော်ကွန်းပန်းချီကားများ download link
ကလေးစီးရီး download link
ရုံကျောက် download link
CANOVIC ရုပ်ရှင်ရုံ download link y CANOVIC ရုပ်ရှင်ရုံ2download link
ရုပ်ရှင် download link
ရုပ်ရှင်ရုံ download link
နေခြည် TV download link
TV စပိန်လိုတိုက်ရိုက် download link
ဘောလုံး Premium HD Premium download link
အားကစား download link
ထောင့် download link
ဂျူလီယာနှင့်မားကို့စ် download link
အပြစ်ပေးသူ download link (ဂျေနင်နက်ဇ်)
စပိန်တီဗီ W3uforum download link
မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ download link
လူတိုင်းအတွက် TV စာရင်း download link
လူတိုင်းအတွက်ရုပ်ရှင်ရုံစာရင်း download link
ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် download link
ကလေးများအတွက်ရုပ်ရှင် download link
စပိန်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ download link
တူးမွောငျး TV ဆု download link
လူတိုင်းအတွက်စီးရီးစာရင်း download link
ကလေးများရုပ်ရှင်ရုံစာရင်း download link
ဝေါ့ဒစ္စနေးစာရင်း download link
အွန်လိုင်းအားကစား ၂၄/၇ တွင် Live download link
Sherpa ရဲ့ထောင့် download link (Sherpa47)၊
Movistar SSIPTV download link (မန်နူရယ်)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » လွှ » Wiseplay စာရင်းများ၊ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဆိုဒ်နှင့်မှန်ကန်စွာမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ကောင်းပြီ၊ မစ္စတာရူဇ်ကရပ်စဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများကိုရပ်စဲလိုက်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောရှင်းလင်းချက်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလည်ပတ်မှု။ ပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုမသိသောကြောင့်အားနည်းခြင်းကြောင့်စိတ်မရှည်ခြင်းအတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်။ သင်၏ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
IAlberto Sanchez ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ဥရောပပြင်ပမှာအခက်အခဲရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သင်ရနိုင်တာကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ မျှဝေခြင်းနှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Quilliercio @ Hotmail ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ငါစာရင်းပြုစုရန်ကြိုးစားသည်နှင့်ကော်ပီမက်ဆေ့ခ်ျကို "bandwidth ကိုကျော်လွန်" ရတယ်သူတို့ကအခြား site မှကူးယူနိုင်သလား?
Quilliercio @ hotmail အားစာပြန်ပါ
သငျသညျအဘယ်အရာကိုမြင်သို့မဟုတ်မမြင်နိုင်နှင့်အတူလျော့နည်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြစ်နိုင်သလား? ဒီတော့တီထွင်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ရက်ကြာလိမ့်မယ်။ LUMBRERAS!
၂ ရက် ထပ်မံ၍ လိုင်း ၇ လိုင်းသို့မဟုတ်ဆိုင်ကယ်မရှိသေးပါ။ f2 ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါ
GeorgeMix စာရင်းသည်ငွေပေးချေမှုဖြစ်လာသည်။ ရှက်စရာကောင်းပေမယ့် "တရား ၀ င်မဟုတ်သော" ပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာများအတွက်တရားစွဲဆိုလိုခြင်း ...
ဤသည်မှာယခုခေတ်ကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်တိုက်ရိုက်တီဗီမပါပဲမည်သည့်နေရာတွင်မျှသွားမည်မဟုတ်ပါ၊ အထက်ပါဖိုရမ်သည်ကွန်ယက်ရှိအပလီကေးရှင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်အရာအားလုံးကဲ့သို့ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရသည်။
ငါအရင်ကလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ အနည်းငယ်ရက်ရက်ရောရောဖြစ်နိုင်တယ်၊ pely နဲ့ f1 ကျေးဇူးတင်တယ်
Premium cinema ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ link ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်၊ အမှားများစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းမရှိ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဒီပြproblemနာကိုမကြာခင်ဖြေရှင်းပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Louis Mont ဟုသူကပြောသည်
Luismont စာရင်းရှိလိုင်းအသစ်များ၊ မင်းကိုငါ link ထားခဲ့ပါ၊
Luis Mont အားပြန်ပြောပါ
help pls ကျွန်ုပ်ဖိုရမ်မှစာရင်းများကိုမည်သို့ရနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အီးမေးလ်အသစ်တစ်ခုဖြင့်မှတ်ပုံတင်လိုသောလင့်ခ်များမရရှိပါ။ သို့သော်၎င်းသည်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်နားလည်သော်လည်းနားမလည်ပါ
ကျွန်တော့်အတွက်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ Real Madrid နဲ့ Seville လိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေမှာတော့ "ဒီဗီဒီယိုကို Wise အပြင်မှာဖွင့်မယ်" ဒါမှမဟုတ် "ဒီဗီဒီယိုကိုတင်လို့မရဘူး" ဆိုတဲ့စာကိုရတယ်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါဂျွန်။ အချို့စာရင်းများသို့မဟုတ်ပါဝင်သောလိုင်းများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာငါကြောက်တယ်၊ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!
ဟိုင်း Cesar ထည့်ဝင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!
ငါသည်သင်တို့ကို 100 × 100 မှာလိုင်းများအားလုံးမှာပြေးဤစာရင်းအသစ်ချန်ထားပါ
လူတွေ၊ ချို့ယွင်းချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ညည်းညူနေသလား???၊၊ မင်းအတွက် ချန်နယ်တွေကို အဆက်မပြတ် အပ်ဒိတ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ ခြေထောက်တွေကို နမ်းခဲ့ရတာ၊ အဲဒီအလုပ်ကြီးကို နှိမ့်ချမယ့်အစား၊ သူ့စိတ်ထားက ကံမကောင်းပါဘူး၊ ငါ့ဘက်က ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေကို အဲဒီကြိုးစားမှုတွေအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ရှိနေတာကိုပဲ ငါပြောပြတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
CHAOS ကို တုံ့ပြန်ပါ။
သင်၏အားလပ်ရက်ကို Android အတွက်ဂိမ်းအသစ်နှင့် application အသစ် ၅ ခုဖြင့်စတင်ပါ
Samsung သည် Apple အတွက် OLED ဖန်သားပြင် ၇ ခုကိုများပြားစေမည်